Ndezvipi zvinonyanya kujekesa zvebhu web search engine optimization?
Indaneti inogara iri kukura uye inochinja. Zuva rega rega vanhu vanoisa toni dzakasiyana-siyana ruzivo mune zvinjini. Kuti unzwisise izvo zvinyorwa zvingave zvinobatsira vashandisi uye vanozvisiyanisa kubva kune spam, mabhii makuru ekutsvaga akaita seGoogle anoda kuvandudza nekuvandudza mararamiro avo nguva dzose. Nokuita kudaro, vanopa mukana kune vose vanoita webhusaiti uye vashandisi vepamusoro kuti vabatsirwe kubva kune data yakanaka. Uyezve, nguva dzose algorithm updates inobvumira kutsvaga injini kuvhara spammers uye nyanzvi dzemafu-SEO nyanzvi. Saka, kuti urambe uri pa TOP ye SEO game, unofanirwa kuziva zvose zvitsva muhutsva hwekutsvaga injini yekutsvaga webhu uye kuita shanduko yakakodzera kune yako nzvimbo. Muchikamu chino, tichakurukura nhatu dzinotsanangura nguva dzakashandura mararamiro eSeO uye dzinoita SEO nyanzvi dzinoshandura nzira dzavo dzewebsite kugadzirisa.
Kuchinja kwakanyanya mu web search engine optimization
Zvakakosha kutaura kuti mumakore gumi apfuura Google algorithm updates yakachinja zvakanyanya mitemo yekutsvaga injini optimization. Kunyange zvazvo vamwe vatengesi vepaIndaneti vakadonha doro mumatunhu avo mushure mokuvandudzwa kweGoogle, vamwe vadzidzisi vepawebsite vanoona nzvimbo iyi vakatora mukana uyu kuvandudza nzvimbo dzavo paSERP. Nhasi tichazotaura nezvemashoko matatu ane simba zvikuru ekuvandudza marongerwo enyika akachinja SEO yanhasi.
Yokutanga yeGoogle Florida Update
Yokutanga Google yakatanga kuitika munaNovember 2003. Inozivikanwa seGoogle Florida update. Iyi inovandudzwa ndiyo yakanyanya kuchinja kuGoogle rankings panguva iyoyo. Chinangwa chikuru cheFloris update ndechekurova vatsva vatsva veSeO vanga vari kuedza kushandura nzvimbo. Yakanga yakagadzirirwa kuchengetedza nzira yakadaro yema-black-SEO se keyword stuffing. Izwi rokuti 'keyword stuffing' rakaonekwa kubva pamazuva ekutanga ekutsvaga injini yekusimudzira. Icho chigadzirwa chechivande chinoita kuti webmasters vashandise kutsvaga nzvimbo dzekutsvaga. Icho chiitiko chekuisa mamwe mazwi makuru kana seti yemitsara inokosha muhutano. Sezvo mutemo aya mazwi ekutsvaga akanga asina kuenderana nehuwandu uye yakagadzirirwa zvakananga kutsvaga bots, asi kwete kuenzanisira vashandisi. Mitsara iyi inogona kudzokororwa kuburikidza netsamba kakawanda iyo inonzwika isiri yezvisikwa. Saka, kuti uvandudze ruzivo rwemushandisi nekutsvaga injini, Google yakasarudza kuongorora mawebsite apo mazwi ezvinyorwa zvinowanikwa. Mushure meizvi mune zvitsva, nzvimbo dzakawanda dzemahara dzakarasika uye dzakatambura zvikuru. Zvakatora nguva yakawanda uye kushanda kwevanowanikwa webhusaiti kuti vadzore ma webhuwo mazita avo mukurumbira. Zvisinei, yakanga iri chidzidzo chakanaka kune avo vari kuedza kuputsa mitemo yakatarwa yepamusoro.
Yechipiri kuburikidza nehukuru hwayo nehuwandu hwenyika yepamusoro ndiyo Google Panda update. Yakatangwa muna February 2011. Chinangwa chikuru chekutsvaira iyi ndechekudzivirira mawebhusayithi nehutachiwana hwehutano hwehutano kubva pakushanda nenzira yavo kuGoogle's TOP tsvaga zvitsva. Nokuita kudaro, Google inoda kudzoka nepamusoro-soro uye masayiti akakodzera pedyo ne TOP ye SERP uye inovandudza ruzivo rwemushandi panguva yekutsvaga. Iyi inovandudzwa yakazununguka kusvika ku12% yemigumisiro yekutsvaga. Iyo huru yeInternet mapurisa neyekugara kwehutambisi inotasikirwa yakarasikirwa kupfuura 50% yevashanyi avo nekuda kweSERP yavo nzvimbo dzinowira. IyiGoogle inobudirira inokuvadza chete iyo mawebsite ane zvishoma zvehutano hwehutano. Kune dzimwe nzvimbo, mamiriro acho haana kuchinjwa zvikuru. Google yakaratidza pachena kuti hupamhi hwepamusoro uye huwandu hwehuwandu hwakakosha huchapiwa mubayiro kune dzimwe nzvimbo dzepamusoro, asi zvinyorwa zvisinganzwisisiki zvinyorwa zvichatsoropodzwa. Panda ainyanya kufunga nezvemasayithi ane zvinyorwa zvishoma. Iyi firiji ndiyo nzira yakanaka yeGoogle kutarisa mapurisa aripo zvakanyatsonaka sezvo zvaizova chinhu chakakura mumigumisiro yekutsvaga nehuwandu hwakashata hwusingaenzanisi hunoenderana nehuwandu hwehuwandu. Vatongi vakuru vemitemo havana kutora kubva kuGoogle filter kusvikira zuva rino. Mazuva ano, Google inoshandura Panda sechikamu chetsika yekugadzirisa maitiro. Inoshanda sechikamu chekudzidzira kupera zvishoma, mwedzi usingaperi pese. Somugumisiro, zvakava zvakaoma kuziva kana nzvimbo inotambura nekuvandudzwa kwePanda kana kwete.
Google algorithm yakagadzirwa muna April 2012. Ndiyo webspam algorithm yakagadzirirwa kutonga avo vasingateereri mirayiridzo yeGoogle. Apo iyi algorithm yakaiswa mukumanikidzika, Google yakabudisa chirevo chinotevera:
".iyi algorithm inomiririra imwe kuvandudza muedza dzedu kuderedza webspam uye kukurudzira huwandu hwakanaka. Nepo isu tisingakwanisi kubudisa zviratidzo zvakasiyana siyana nokuti hatidi kupa vanhu nzira yemutambo mitsva yedu yekutsvaga uye kuwedzera kuitika kwevashandisi, mazano edu kune webmasters ndeyekutarisa mukusika nzvimbo dzakakwirira dzinovaka mukana wakanaka wevashandisi uye vashandise chichena chikwata che SEO nzira (GOOGLE). "
Yakatarirwa kune mawebhusayithi akashandisa zvinyengeri zvekubatanidza mazano kuti ataure zvakakwirira paGoogle. Avo vatengesi veIndaneti uye webmasters avo vakawana juisi yekubatanidza kune nzvimbo dzavo vachishandisa mashizha emhando yeOO maitiro akadai sekubatanidza kubudiswa kana kuunganidzwa kwekurima kwakarambidzwa. Apo Google Penguin update inosunungurwa, masayiti akaatora matanho ekubvisa zvisingaiti zvekare kumashure anogona kudzoka zvakare. Kubva kune rumwe rutivi, Google inopa mukana wekubvisa zvakaipa zvakashamisika nokukurumidza. Chinhu chose chaunoda ndechokushandisa Google disavow link links. Avo avo vakaroverwa neGoogle Penguin update vaifanira kumirira kusvikira gadziriro iyi yakamhanya zvakare kuti vawane nzvimbo dzavo dzepamusoro zvakare.
Iyi shanduro yegorongiti inogadzirisa nzvimbo yewebsite sehutano uye hunoenderana nehutano chikamu chinokosha cheGoogle ranking system. Ndicho chikonzero zvingakutengesa iwe nzvimbo inozivikanwa kushandisa shanje yebhu yewebhu SEO mbatya kana kukoka unprofessional SEO team. Parizvino, Penguin update yakanyanya kushandisa mushure mekushandisa zvisungo uye yakabatwa ne 3,1% yemibvunzo Source .